Xwayani amakolishi angoqhiphukhowe | News24
Xwayani amakolishi angoqhiphukhowe
Kwelakho elingungqa phambili neliyizwi labantu, ngithi make ngiwuhlabe ngiwulawule ngamakolishi angoqhibukhowe avame ukuqola abantu imali eshisiwe. Kuliqiniso elingephikiswe ukuthi njengoba unyaka uqala, abafundi abaningi babhekise amabombo ezikhungweni zemfundo ephakeme ze baqeqeshelwe amakhono emisebenzi.
Kubalulekile ukuthi abafundi nabazali bavule amehlo, babheke ukuthi ikolishi lelo ababhalisa kulo kumbe isikhungo isikhungo semfundo ephakeme sibhalisiwe yini ngaphansi kweSouth African Qualification Authority (SAQA).
Akungavunyelwa abafundi ukuthi bethweswe iziqu ezingumgunyathi, kucwile izimali.
Abazali abangajahi ukutholela abafundi izikhala zokufunda bengaqinisekisanga ukuthi isikhungo ababhalisa kuso sibhalisiwe yini ngokusemthethweni. Sibonile emnyakeni edlule abazali kanye nabafundi bekhihla esikaNandi ngenxa yokugqenywa engeqiwa ntwala yizikhungo ezingombombayi.
UMnyango wezeMfundo wabe usuthatha izinyathelo ezinqala ulwa nalo mkhuba kodwa abantu basahudula izinyawo ekusebenziseni izindlela okuhlolwa ngazo ukuthi isikhungo sibhalisiwe yini ngokusemthethweni.
Nginxusa abazali kanye nabafundi ukuba baxhumane neSouth African Qualification Authority ukuhlola ukuthi isikhungo abazobhalisa kuso sibhaliswe ngokusemthethweni.
Bangashayela ku- 012 349 3840 noma bathumele imibuzo ku-admin@che.ac.za
Ngiyanxusa ngiyagcizelela kubafundi nabazali ukuba bangasongi izandla, hleze konakale.
Sbonelo 'K-Master'Khumalo, eNtuthuko oPongolo